Maxaad xaqiiqo ah oo aad ka ogtahay Cudurka Alzheimer (Dhimir Beelid)? - Caasimada Online
Home Caafimaad Maxaad xaqiiqo ah oo aad ka ogtahay Cudurka Alzheimer (Dhimir Beelid)?
Maxaad xaqiiqo ah oo aad ka ogtahay Cudurka Alzheimer (Dhimir Beelid)?
Cudurka Alzheimer waa nooca ugu badan ee caqli suulidda. Caqli suuliddu waxay dhacdaa iyada oo ka dhalata isbeddellada ku yimaada maskaxda ee saameeya awoodda qofku in uu ku fekero oo wax xusuusto.
Waxay noqon kartaa mid aad u daran oo saameysa hawlo maalmeedka.
• Hubin doonaa xaaladda maskaxeed ee qofka asagoo weydiinaya su’aalo xusuus iyo kuwo fekerba.